‘Tanaan Afreeffachoo!’Ganzabee Dibaabaa Ji’a Tokkotti Marroo Afur Fiigichaan Addunyaa Moote
Bitootessa 10, 2014
Ganzabeen ta Sopot,Polaandi waliin ji'a tokko keessatti marroo afur dorgommiin addunyaa moote.Ta Sopot
Atileetiin Itoophiyaa,duruu akkuma addunyaan fiigichaan mootu,Ganzabee Dibaabaa dorgommi metirii 3000 mana keessaa IAAF,Sopot,Polanditti qopheesse 8:55:06 moote ji’a tokkotti marroo afur mootee addunyaa afaan qabsiifte.
Ganzabeen akkuma Stokcholmilleetti moote Polandilleetti mootee warqii dabalatte. Atileeti Ganzabeen ji’a tokkotti marroo afur dorgommii addunyaa mootee tanaan afreeffachoo jette.Atileetiin Amerikaa Nia Aliilleen dorgommiii ulee kutaa cehan metirii 60 Sopot Poladnitti moote
Namii Ganzabeetti aanee lammeessoo tahe, atileetii Keenyaa,Helen Obaariiti.Gama Fiigicha metiri 3000 ka dhiiraa ammoo atileetii Keenyaa,Caleb Mwangangi moo’e. Dejen G/Mesqel ammoo sadeessoo bahe.
Gama kaaniin ammoo atileetiin Amerikaa,Nia Ali,dorgommi Sopot,Poland tana irratti fiigicha ulee irra kutaa fiigan metirii 60 mootee USA warqiin galte.Nia Alii,nama ganna 25ti fiigicha ulee irra kutan metiri 100 fiiguun beekamtii.Atileetii Austiraaliyaa ganna lamaan walti aanaa kana olympikii moohatte Sally Pearson moote.
Taphattoota kubbaa miilaa addunyaan dureeyyota kudhannan
1.Kiristiaanoo Ronaaldoo,Portugal qabeennii isaa euro miliyoona 148.
2.Lionel Messi,Barcelona €m146.
3.Samuel Eto’o dhalootaan Kameroon amma Chelsea taphata horiin isaa €m55
4.Wayne Rooney, Manchester United - €m84 5.Kaka, AC Milan -€m82
6.Neymarii fi maatii isaati Barcelona - €80m,
8.Zlatan Ibrahimovic, Paris St-Germain - €m69
9.Gianluigi Buffon,Juventus - €m63
10.Thierry Henry,New York Red Bulls - €m57.
FILE/Dorgommiin kubbaa miilaa Ingiliizi,EPL dorgommii akka malee daawwatan keessaa tokko
Gama kaaniin ammoo dorgommiin EPL,dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Ingiliizaa ji’a lamaa keessatti dhumattii,Chelsiin Totteham ganna dabre maanajerai isii Andre Villas hujii irraa gussitee ufiifuu miila lafatti dhaabachuuf jala oli dhidhiitachuutti jirtu 4-0 carassitee qabgxii 66tiin ufi oli ceetee quphi jettee sadarkaa tokkeessa irra buute.
Goolii Chelsii Samule Etootti jalqabe achii kaatee afur galte. Chelsiin tapha 75 ufi qopheessite keessaa 59 moote.
Dorgommii kilaboota Xaliyaanaa Serie A keessaa Juventuusitti qabxii 77n dura jira. Dorgommii waancaa addunyaa guyyaa 95 qofatti hafe.Biyyoota Afrikaa keessaa dabaran keessaa tokko Kameroon.
Ji’a dhufu keessaa Austiraaliyaa Maseedooniyaa fi Paragu’aah waliin Caamsaa 26 Caamsaa 29 tapha hariyummaa taphatti.